Iyi mafirimu inosanganisira mugshots yemakumi mashanu nhengo dzeAmerica mafia, mazita emakemikari nemakwikwi akawanda, akapfuura uye aripo. Dzidza nezvekambani, zviitiko zvakakura uye yekupedzisira kwevakuru vanozivikanwa vemafia.
Iyo inozivikanwawo se "Dapper Don" uye "The Teflon Don" John Gotti. Mug Shot
A gallery ye mugshots yemhengo dzeMafia mafia, mazita emakonduru nemashamba, akapfuura uye aripo.
John Joseph Gotti, Jr. (October 27, 1940 - Gumiguru 10, 2002) akanga ari mutariri weGambino Crime Family, mumwe weVashanu Families muNew York City.
Gotti akabatanidzwa mumakwara emigwagwa kusvikira atanga kushanda kumhuri yeGambino mumakore makumi matanhatu nemakumi matanhatu, nhumbi dzekubata dzimba uye kutengesa zvinhu kubva kuNorth West uye United airways.
Onawo: Glossary ye Common Common Mafia Terms
Mutongi wehurumende yehutongerwo uhu muNew York uye muNew Jersey American bos-syndicate boss muNew York neNew Jersey. Mapurisa Photo
Joe Adonis (November 22, 1902 - November 26, 1971) akabva kuNaples kuenda kuNew York achiri mwana. Mumakore ekuma1920 akatanga kushandira Lucky Luciano uye akapinda muurayi wevatungamiri vemhosva, Giuseppe Masseria. Ndiine Maseria kunze kwekufamba, simba raLuciano mukurwisana kwakarongeka rakakura uye Adonis akava vashandi vemabhanki.
Mushure mokunge apiwa mhosva yekubhejera muna 1951, Adonis akaendeswa kujeri ndokuzoendeswa kuItaly apo zviremera zvakaona kuti akanga ari mutorwa asina mvumo.
Uyewo anozivikanwa se "Mad Hatter" uye "Ishe High Executioner" New York Cosa Nostra Boss. Mug Shot
Albert Anastasia, akaberekerwa Umberto Anastasio, (September 26, 1902 - Gumiguru 25, 1957) akanga ari Gambino mhosva dzemhuri dzemhuri muNew York anozivikanwa zvakanakisisa pamusana pekuita basa rake mukugadzira chibvumirano chinouraya chikwata chinonzi Murder, Inc.
Iyo inozivikanwawo se "Barney" Liborio "Barney" Bellomo. Mug Shot
Liborio "Barney" Bellomo (b. January 8, 1957) akazova Genovese capo mumakore makumi matatu uye akakura nekukurumidza kuita basa reGenovese mhuri yezvemhosva yeNew York mushure meVincent "Chin" Gigante akatongerwa kupomerwa muna 1990.
Pakazosvika 1996, Bellomo akanga akatarisana nemhosva dzekunyengedzera, kuponda nekupamba uye akatongerwa makore gumi mujeri. Akapomerwazve zvakare nokuda kwekubhadhara mari muna 2001 uye mamwe makore mana akawedzerwa munguva yake yejeri.
Kubva muna 2008, Bellomo zvakare akatarisana nekunyengedzera uye akatongerwa pamwe chete nevamwe vatanhatu vakachenjera mukunyengedzera, kubatwa, kuvhara mari uye kubatanidzwa kwake muna 1998 kuuraya Genovese capo Ralph Coppola. Bellomo akabvuma kubvunzurudzwa uye akagamuchira gore uye zuva rimwe chete pamutongo wake. Akarongerwa kusunungurwa muna 2009.
Anozivikanwa nekutora mutsara, "Hapana chaunoda, inongova bhizimisi." Abbadabba ane makore 15. Mug Shot
Otto "Abbadabba" Berman aizivikanwa nokuda kwehutano hwake hwemasvomhu uye akava munyori wenhoroondo uye mutungamiri wechikwata chinonzi Dutch Schultz. Akaurayiwa nemhomho yepfuti yakabhadharwa naLucky Luciano pa Palace Chophouse tavern muNewark, NJ muna 1935.
Mukana uyu wakatorwa paaiva nemakore gumi nemashanu uye akasungwa nekuda kwekuedza kubata chibharo, asi akawana asina mhosva. Mufananidzo wakatevera wakatorwa muna 1935, mwedzi asati afa.
Mathematical Whiz Hapana munhu, inongova bhizimisi. ".
Otto "Abbadabba" Berman (1889 - Gumiguru 23, 1935), akanga ari mutevedzeri wezvemhosva weAmerica akazvimirira uye mutungamiri wechikwata cheDutch Schultz. Iye anozivikanwa nekugadzira mutsara wekuti "Hapana chaunoda, inongova bhizimisi."
Giuseppe Bonanno / Joe Bonanno
Yakatumidzwa "Joe Bananas" - zita raakaramba asingadi. Joe Bonanno. Mug Shot
Giuseppe Bonanno (January 18, 1905 - May 12, 2002) akanga ari Sicilian-akaberekerwa muAmerica akarongerwa mumiriri wevanhu vakazova mutariri wemhuri yeBonanno mhosva muna 1931 kusvikira asarirwa muna 1968. Bonanno akabatsira pakuumba Mafia Commission, yaiva rakagadzirirwa kutarisira mabasa ose eMafia muUnited States uye inoshanda kugadzirisa kupesana pakati peMafia mhuri.
Bonanno haana kumboiswa mujeri kusvikira apedza kuve saBananno mhuri boss. Munguva ye1980 akaendeswa kujeri nekuvhara ruramisiro nekunyadziswa kwematare. Akafa muna 2002, ava nemakore 97.
Kutanga uye chete mhomho yemhomho inofanira kuurayiwa. Muto Wose Wemabhiza Anofanira Kuurayiwa. Mug Shot
Louis "Lepke" Buchalter (Feb. 6, 1897 kusvika March 4, 1944) akazova mutungamiri mukuru we "Murder, Incorporated" boka rakaumbwa kuti riite kuponda maMafia. Muna March muna 1940, akatongerwa kuva nemakore makumi matatu ehupenyu nekuda kwekunyengedzera. Akatumirwa kuLeavenworth Penitentiary munaEpril 1940, asi akazotongerwa rufu pashure pekuuraya Murder Inc. Muurayi Abe "Kid Twist" Reles akabvumirana nevatongi vachipa mhosva Lepke yekuponda.
Akafira muchigaro chemagetsi ku Sing Sing Prison musi waMarch 4, 1944.
Mafia Turncoat. Mug Shot
Tommaso Buscetta (Palermo, Chikunguru 13, 1928- New York, Kubvumbi 2, 2000) yaiva imwe yenhengo dzekutanga dzeSicilian Mafia dzakaputsa mutemo wekunyarara uye dzakabatsira hurumende kushora mazana evanhu veMafia vose muItaly nekuAmerica Mukudzoka nokuda kwehupupuriro hwake hwakawanda akabvumirwa kurarama muUnited States uye akaiswa muChirongwa Chekudzivirirwa kweZvapupu. Akafa nekenza muna 2000.
Counterfeiter Giuseppe Calicchio. Mug Shot
Muna 1909, Giuseppe Calicchio, mumwe wekune imwe nyika kubva kuNaples, akatanga kushanda muchikwata che Morello mu Highland, New York sechinyorwa chekunyora uye chinyorwa chemari yakaipa yeCanada neAmerica. Muna 1910, simiti yekudhinda yakashungurudzwa uye Calicchio pamwe chete nomubati wake Giuseppe Morello nevamwe vane gumi nevaviri vakasungwa. Calicchio akagamuchira makore 17 basa rakaoma uye ma $ 600, asi akabudiswa muna 1915.
Alphonse Capone (1)
Iyo inozivikanwawo seScarface uye Al Scarface. Mug Shot
Alphonse Gabriel Capone (January 17, 1899 -January 25, 1947), akanga ari muItaly American gangster akazova mutungamiriri wesangano rezvemhosva ainzi The Chicago Outfit. Akaita mari yakawanda muhotera yebhootleg panguva yeParamende.
Mukurumbira wake semuvengi ane utsinye muChicago wakanyatsosimbiswa mushure meSt. Valentine's Day Massacre musi waFebruary 14, 1929, apo nhengo nomwe dze "Bugs" Mhomho yeMoran dzakanga dzakashongedzwa pamadziro egaraji nevasikana vaiti semapurisa.
Kutonga kwaCapone pamusoro peChicago kwakamiswa muna 1931 paakaendeswa kujeri nokuda kwekutengesa mutero. Mushure mokunge asunungurwa akaiswa muchipatara nokuda kwekuora mwoyo kwepfungwa nekuda kwekuva nechirwere chechirwere. Makore ake sevanhu vechikwata vakanga vapera. Capone akafa mumba make muFlorida, asina kudzokera kuChicago mushure mekunge asunungurwa kubva mujeri.
Iyo inozivikanwa se "Al," "Scarface" uye "Snorky" Scarface. Mug Shot
Al Capone aifungidzirwa sechikwata cheNeapolitan neVaSicialian Mafia vasina kumbvuma kumugamuchira semumwe wavo, pasinei nesimba raakawana muChicago.
Al Capone Mug Shots
Ko Al Capone akawana sei mavanga pachiso chake? Al Capone. Mug Shot
Ko Al Capone akawana sei mavanga pachiso chake?
Muna 1917, Al Capone akanga achishanda semubhadhari weNew York mukuru wechikwata Frankie Yale muConey Island. Akapinda mumhirizhonga neNew York mhomho yevanhu vainzi Frank Galluccio nokuti Capone akaramba achitarisisa munun'una waGalluccio.
Nhau yacho inotaura kuti Capone akaudza hanzvadzi yaGalluciio, "Shamwari, une dhongi rakanaka uye ndinoreva kuti sekurumbidzwa, nditendi ini."
Galluccio akazvinzwa uye akazopenga uye akakumbira kukumbira ruregerero iro Capone rakaramba, achiomesa kuti yese yaiva kuseka. Galluccio yakava madder uye yakapura Capone katatu kuruboshwe rworuboshwe rwechiso chake.
Gare gare Capone akakumbira ruregerero mushure mekutukwa nevakuru vevanhu veNew York.
Zviri pachena kuti zviyo zvakashungurudza Capone. Aizoisa pfupa kumeso ake uye akasarudza kuva nemifananidzo yakatorwa kuruoko rwake rworudyi.
Al Capone (4) An Al Capone Munyengeri?
An Al Capone Mupombwe? An Al Capone Mupombwe ?. Mug Shot
An Al Capone Munyengeri?
Muna 1931, Real Detective magazini yakabudisa nyaya yakapa kuti Al Capone ainge afa uye munun'una wake akauyiswa kuUnited States naJohnny Torrio semunyengeri ndokutora mabasa eCapone's Chicago.
Mune imwe nyaya muHelena Montana Daily Independent, kuenzaniswa kwezvimwe zveCapone zvakaitwa kuti zvibatsire kutsigira dzidziso, kusanganisira kuti maziso ake akanga aenda kubva mushuzha kusvika kune bhuruu, nzeve dzake dzakanga dzakakura uye kuti minwe yake yakanga isina kufanana neiyo pafaira .
Gambino Family Crime Boss Paul Castellano. Mug Shot
Iyo inozivikanwawo se "PC" uye "Big Paul"
Paul Castellano (June 26, 1915 - December 16, 1985) aiva mukuru wemhuri yeupombwe yeGambino muNew York muna 1973 mushure mekufa kwaCarlo Gambino. Muna 1983, FBI yakasunga imba ya Castellano uye yakawana maawa 600 eC Castellano inotaura nezvebhizimisi remabhiza.
Nemhaka yematepi Castellano akasungwa nekuraira kuponda kwevanhu makumi maviri nemasere uye akasunungurwa pachibharo. Mwedzi yakati gare gare iye nemakambani akawanda emhosva emhuri akabatwa zvichienderana nemashoko kubva kumatepi mune izvo zvakazozivikanwa seMafia Commission Trial, yakagadzirirwa kubatanidza Mafia mazita kumabasa ekuvaka.
Zvinotendwa nevakawanda kuti John Gotti anovenga Castellano uye akarayira kuponda kwake kwakaitwa musi waDec. 16, 1985, kunze kweSparks Steak House muManhattan.
Paul Castellano - The White House
Paul Castellano. Mug Shot
Apo Paul Castellano akava mukuru wemhuri yeGambino muna 1927, akatamira kuStenen Island kune imwe imba yaive yakafanana neye White House. Castellano akazvitumidza kuti White House. Iyo iri muimba ino, yakapoteredza tafura yekicheni, iyo Castellano inotaurirana nezvebhizimisi reMafia, asingazivi kuti FBI iri kutora hurukuro yake.
Antonio Cecala. Mug Shot
Muna 1908, Antonio Cecala akanga ari mutengesi unoshanda kuna Giuseppe Morello. Basa rake raive nguva pfupi mushure mokunge atongerwa mhosva muna 1909 wekubatana kwemhosva uye akatongerwa makore gumi nemashanu uye $ 1 000.
Prime Minister we Underworld Prime Minister we Underworld. Mug Shot
Frank Costello, mutungamiri wemhuri yemhosva yeLuciano pakati pa1936 na1957, akanga ari mumwe wevakuru veMafia vane simba zvikuru munhoroondo yeUnited States. Akanga ane simba pamusoro pekubhejera uye mabasa ekudzidzira mabhoti munyika yose uye akanga awana simba mune zvezvematongerwe enyika kupfuura chero chimwe chimiro cheMafia. Semutungamiri wezvipi zviremera zvinonzi "Rolls-Royce yehutongerwo hwemhosva", Costello akasarudza kutungamirira nehupi hwake pane hutsika.
Onawo: Frank Costello: Prime Minister we Underworld
Mwana weHod Harlem Frank Costello. Mug Shots
Paaiva nemakore mapfumbamwe Frank Costello, amai vake nehanzvadzi vakabva kuLauropoli, Calabria, Italy kuEast Harlem muNew York City. Pakazosvika makore gumi nemaviri, akabatanidzwa mumakororo emigwagwa uye akatumirwa kujeri kaviri nekuda kwekurwa nekuba. Pazera remakore makumi maviri nemaviri akadzorerwa zvakare kujeri pamhosva yezvombo. Yaiva panguva iyo Costello akasarudza kutanga kushandisa ubongo hwake, kwete musuru, kana aizova neramangwana neMafia.
Iyo inozivikanwawo se "Mickey Scars" Michael DeLeonardo. Mug Shot
Michael "Mickey Mitsvuku" DeLeonardo (b. 1955) akanga ari muNew York gangster uyo panguva imwechete akanga ari mutungamiriri wemhuri yeupombwe yeGambino. Muna 2002 akange aine kubuda pamwe nemudzimai wemhuri, Peter Gotti, nekuvanza mhuri yemari. Uyewo muna 2002 akatongerwa mubasa rekunyengera, kubatwa, kubhadhara chikwereti, kupupurira kupopotera, uye kuponda kweGambino kunobatanidza Frank Hydell naFred Weiss.
Mushure mokunge tisingakwanisi kuzviuraya, DeLeonardo akasarudza kupinda muHurumende Rokudzivirira uye akapa hurumende yehurumende hupupuriro hwakaipa pamusoro pePeter Gotti, Anthony "Sonny" Ciccone, Louis "Big Lou" Vallario, Frank Fappiano, Richard V. Gotti, Richard G . Gotti, naMichael Yanotti, John Gotti, Jr., Alphonse "Allie Boy" Persico uye pasi pechechi John "Jackie" DeRoss.
Anozivikanwawo se "Tommy Ryan" Thomas Eboli. Mug Shot
Thomas "Tommy Ryan" Eboli (b. Gumiguru 13, 1911 - July 16, 1972) aive musha weNew York City, anozivikanwa nokuda kwekuita mutariri wemhuri yeGeneovese kubva muna 1960 kusvikira muna 1969. Eboli akaurayiwa muna 1972, haana kukwanisa kudzorera Carlo Gambino $ 4 Mamiriyoni emadhora aakwereta kuti apiwe zvinodhaka, zvakawanda zvekuti zviremera zvakabatwa pakurwiswa.
American Gangster. Mug Shot
Uyewo anozivikanwa se "Dopey" Benny
Benjamin Fein akaberekerwa muNew York City muna 1889. Akakurira munharaunda yevarombo nechezasi kweEast East uye akapinda muchiito chezvikwata zvehupenyu hwake hwose. Somwana akanga ari mbavha shoma uye somunhu mukuru akazova chikwata chinonyanya kuzivikanwa chakatonga New York basa rekunyengedzera muma1910s.
Bhosi yemhuri yaLucchese yemhosva. Mug Shop
Gaetano "Tommy" Gagliano (1884 - 16 February 1951) akashanda semudzidzisi weMafia wepasi pekudzivirira kwemhuri yemhosva yeLucchese, mumwe wezvakakurumbira zvikuru "Mhuri Firi" muNew York. Akashanda kwemakore makumi maviri asati atora hutungamiri pamusoro pe Underboss, Gaetano "Tommy" Lucchese muna 1951.
Bhosi weBosses Carlo Gambino. Mug Shots
Carlo Gambino akauya achibva kuSicily muna 1921 ava nemakore makumi mana nemashanu. Aive nhengo yeboka rechikwata, akabva atanga kukura muNew York Mafia ladder. Akashanda muzvikwata zvakatungamirirwa naJoe "Boss" Masseria, Salvatore Maranzano, Philip naVincent Mangano, naAlbert Anastasia. Mushure mekuponda kweAnatasia muna 1957, Gambino akava mutungamiriri wemhuri, uye akachinja zita re sangano kubva kuna D'Aquila kuenda kuGambino. Anozivikanwa saBhosi weBosses, Carlo Gambino akakura kuva mumwe wevakuru veMafia vane simba nguva dzose. Akafa nekushaya simba kwemoyo pazera remakore 74 muna 1976.
Carlo Gambino (2)
Carlo Gambino. Mug Shot
Carlo Gambino aiva munhu akanyarara, asi ane ngozi zvikuru. Akarambidza akauraya nzira yake kuenda kumusoro kwemhuri yeGambino, achitungamirira mhuri yemhosva kwemakore makumi maviri, uye Komisheni kwemakore anodarika gumi nemashanu. Zvinoshamisa kuti Gambino akapedzera mwedzi 22 mujeri nekuda kwehupenyu hwake hwemhosva.
Vito Genovese (November 27, 1897 - February 14, 1969). Mug Shot
Uyewo anozivikanwa saDon Vito, zita rake raanoda
Vito Genovese akasimuka kubva kumaodzanyemba kweEast East Side sevechiri kuyaruka kuti ave mubati wevemhosva yeGenovese yemhuri. Ukama hwake hwemakore makumi mana naCharlie "Lucky" Luciano akamuwana iye saLuciano pasi pepfudzi muna 1931. Dai zvisiri zvekuuraya mhosva dzakatumira Genovese kuvanda muItaly, angadai akada kutora somukuru wemhuri apo Lucia akaendeswa kujeri muna 1936. Yakanga isati yasvika kuAmerica uye mushure mekunge vatambi vemaMafia vakaurawa, kuti Genovese aizove "Don Vito" mutongi ane simba wemhuri yeGenovese.
Vito Genovese (2)
Muranda anovimba weUnited States Army Vito Genovese. Mug Shot
Muna 1937, Genovese akatizira kuItaly apomerwa mhosva yekuponda kwaFerdinand Boccia. Mushure mokunge vashanduki vauya muItaly muna 1944, Genovese akazova mutariri anovimbisirwa mutariri muhofisi huru yeUnited States Army. Uhu hukama hutsva hahuna kumudzivisa kushanda mubasa guru rekutsvaga mumusika pasi pekutungamirirwa kwevakuru veMafia vane simba zvikuru muSicily, Calogero Vizzini.
Genovese akadzorerwa kuUnited States pashure pokunge yawanikwa kuti akanga ari mupoteri aida kuuraya muNew York.
Iyo inozivikanwawo se "Chin" uye "Oddfather" Vincent Gigante. Mug Shot
Vincent "Chin" Gigante (Kubvumbi 29, 1928 - December 19, 2005) yakabva kubva mubhokisi yebhokisi kusvika kuNew York mhirizhonga uyo akatungamira mhuri yeGeneovese mhosva.
Yakabatanidzwa "Oddfather," nehurukuro, Gigante yakaita zvirwere zvepfungwa kuitira kuti arege kupomerwa. Akanga achiwanzoona achidaidzira Greenwich Village muNew York City mumvura yake yekushambidza uye mashizha, achibatanidza zvisiri izvo kwaari.
Chiitiko chacho chakamubatsira kuti arege kupomerwa mhosva dzake kusvikira muna 1997 apo akatongerwa mhosva yekunyengedza uye kupomerwa mhosva. Akatongerwa makore 12 ari mutorongo, asi akava nemamwe makore matatu akawedzerwa paakareurura ane mhosva yekupedza chirwere chake chepfungwa. Gigante akafa mujeri muna 2005.
John Gotti Mug Shot (2)
John Gotti. Mug Shots
Pakazosvika makore makumi maviri nemakumi matatu, Gotti akanga ari mutongi capo kune mhuri yeGambino. Kupikisa mitemo yemhuri, Gotti nevashandi vake vakanga vachiita heroin. Apo yakawanikwa, mutariri wemhuri Paul Castellano aida kuti vashandi vaparadzwe uye pamwe vaurawe. Pane kudaro, Gotti nevamwe vakaronga kuurawa kweCastellano uyo akafuridzirwa katanhatu mubhuku reManhattan. Gotti akabva atora semuzinda weGambino wemhuri uye akaramba aripo kusvikira afa muna 2002.
John Gotti. Mug Shot
IFBI yakanga ine Gotti pasi pekutariswa kwakaoma. Vakatengesa foni yake, chikwata nedzimwe nzvimbo dzaaiwanzoita uye pakupedzisira akamubata pa tepi pamusoro pebhizimisi remhuri kusanganisira kuuraya. Somugumisiro Gotti akapomerwa mhosva gumi nematanhatu ekuuraya, kurangana kuuraya, kubhadhara chikwereti, kunyengera, kusagadzirisa kururamisira, kubhejera kusina kutenderwa uye kutora mutero.
Muna 1992, Gotti akawanikwa aine mhosva uye akatongerwa kuiswa mujeri kwehupenyu pasina kukwanisa kusununguka.
John Gotti (4)
Asati apinda mujeri John Gotti akawana zita rezita rokuti Dapper Don, nokuti aiwanzopfekedza zvipfeko zvinodhura ndokutora mukurumbira-semunhu.
Mutsamba uyu wakamutumidzawo The Teflon Don nokuti mumabasa ake ose ehupfumi mazhinji ezvimhosva zvaakaunzwa pamusoro pake haazomboregi.
John Gotti Mug Shot (5)
Gotti akatumirwa kuUnited States Penitentiary kuMarion, Illinois, uye akachengetwa ari oga muchitokisi. Sero rake, raive pasi pevhu, rakayera mamita masere nemanomwe uye akabvumirwa kunze kweawa imwe chete pazuva kuti aite zvega.
Mushure mekunge aonekwa kuti ane kenza yemutsipa akaendeswa kuU.S. Medical Center yeFederal Prisoners muSpanish, Missouri uko akafira musi waJune 10, 2002.
33 ve 55
Anozivikanwawo seJunior Gotti John "Junior" Gotti. Mug Shot
John Angelo Gotti (akaberekwa musi waFebruary 14, 1964) ndiye mwanakomana weiyo zvino afa Gambino mhosva yepamutemo John Gotti. Zvakashata Junior Gotti aiva capo mumhuri yeGambino uye akanga ari mutariri webasa apo panguva iyo baba vake vakanga vari mutirongo. Muna 1999 Junior Gotti akasungwa uye akawanikwa aine mhosva pamhosva dzekutengesa mhosva uye akatongerwa makore matanhatu mujeri.
Iyo inozivikanwawo se "Sammy Bull" uye "Mambo Rat" Salvatore Gravano. Mug Shot
Salvatore "Sammy the Bull" Gravano (akaberekwa musi waKuguru 12, 1945) akava muChitubu chemhuri yeGambino yezvemhosva shure kwekubatana naJohan Gotti mukuronga uye kuparadza kuurawa kwaPauro Castellano, mutariri weGambino uyo. Mushure mekuponda kwaCastellano, Gotti akatamira panzvimbo yepamusoro uye Gravano akatamira saApriboss yake.
Muna 1991, kuongorora kweFBI kwakatungamirira kusungwa kwevamwe vatambi vechidiki mumhuri yeGambino kusanganisira Gotti naGravano. Achitarisa mutongo wakareba wejeri, Gravano akava humwe hurumende kupupurira mukutsinhana nemutongo wakanyanya. Kupupurira kwake pamusoro peGotti, iyo yaisanganisira kubvuma kuve nekutora chikamu mumhondi 19, zvakaguma nemutongo uye mutongo weupenyu kunaJohn Gotti.
Zita rake rainzi "Sammy Bull" rakakurumidza kuchinja kuva "King Rat" pakati pezera rake mushure mokupupurira kwake. Kwenguva pfupi akanga ari muhurongwa hwekudzivirira US, asi akaisiya muna 1995.
Salvatore Gravano (2)
Kufanana nababa saBaba saSalvatore Gravano. Mug Shot
Mushure mekubva kuUnited States Federal Witness Protection Program muna 1995, Gravano akatamira kuArizona ndokutanga kutengeserana mumagariro. Muna 2000, akasungwa uye akapomerwa nezvekutengesa zvinodhaka uye akagamuchira mutongo wemakore 19. Mwanakomana wake akabatwawo mhosva nokuda kwekuita kwake muchechi ye-ecstasy ring.
Henry Hill Mug Shot
FBI Informant Henry Hill. 1980 FBI Mug Shot
Henry Hill akakurira kuBrooklyn, New York uye achiri muduku akatarisa nzira dzemhuri yekwaLucchese yemhosva.
Kuva mutauro weItaly uye wokuIrish, Hill yakanga isati yaitwa "mumhuri yemhosva, asi yaiva murwi we capo, Paul Vario, uye akabatanidzwa mukupamba makori, kubhadhara chikwereti, kugadzira mabhuku uye kutora chikamu muRefthansa heist yakaipisisa muna 1978.
Mushure mekunge shamwari yepedyo yeGomo Tommy DeSimone yapera uye haana kuteerera nyevero kubva kune vaaifambidzana navo kuti varege kushandisa madhiragi, Gomo rakazofananidzira kuti aizourayiwa uye akava FBI. Uchapupu hwake hwakatsigirwa mukutenda kwevapambi 50.
Henry Hill. Mug Shot
Henry Hill akadzingwa kunze kwepurogiramu yekudzivirira kupupurirwa mukutanga kwema1991 nekuda kwekusakwanisa kwake kurega kushandisa zvinodhaka kana kuchengeta nzvimbo yaanove isingazivikanwi.
Henry Hill ava kunyanya kuve akakurumbira mushure mekubatana nekubvumirana naNicholas Pileggi muna 1986, bhuku rezvemhosva rechokwadi, Wiseguy, rakazoitwa mufirimu ye1990 Goodfellas, umo Hill yakaitwa naRay Liotta.
Meyer Lansky. Mug Shot
Meyer Lansky (akaberekerwa Majer Suchowlinski, musi waJuly 4, 1902 -January 15, 1983) aiva chiitiko chikuru mukurwisana kwakarongeka muUnited States inowanzotaurwa kakawanda se "Godfather of Godfathers", Lansky, pamwe naCharles Luciano, ndivo vaiita basa iri yeThe Commission, dare rinodzora reMafia muUnited States Inonziwo Lansky aiva nemhosva ye Murder, Inc., boka rakaita kuuraya kwemhosva dzemhuri.
40 e 55
Mumufirimu The Godfather Part II (1974), humiro Hyman Roth inoratidzwa naLee Strasberg, inobva kuMeyer Lansky. Mune mafirimu, Roth anoudza Michael Corleone kuti "Tiri vakuru kudarika US Steel" iyo inonzi ichinyorwa chinobva kuLansky uyo aive achitaura nezveCosa Nostra kumudzimai wake.
Anozivikanwawo seSocks Joseph Lanza. Mug Shot
Joseph A. "Socks" Lanza (1904-Gumiguru 11, 1968) akanga ari nhengo yeGenzovese mhuri yemhosva uye mutungamiriri weChishanu 359 United Seafood Workers union. Akanga akatongerwa nebasa rekunyengera uye gare gare nokuda kwekubiridzira, iro akatongerwa makore manomwe kusvika gumi mujeri.
Anozivikanwawo seCrazy Phil Phillip Leonetti. Mug Shot
Phillip Leonetti (b. Kubvumbi 27, 1953) akaita seanofananidza hupenyu hwake shure kwehanzvadzi yake, Philadelphia mukuru wemhuri mhirizhonga Nicodemo Scarfo. Mumakore ekuma1980, Leonetti akanga achifamba nemhomho yemhosva yemhuri semhomho yevanhu vakaipisisa, capo uye zvakare pasi pechiso kusvika kuScarfo.
Mushure mokunge agamuchira mutongo wejeri wemakore 55 muna 1988 pamusoro pemhosva yekuuraya uye kukanganisa, Leonetti akasarudza kushanda pamwe nehurumende yehurumende semusingazivi. Kupupurira kwake kwakaguma mukutenda kwevanhu vane hutungamiri hwepamusoro, kusanganisira John Gotti. Mukudzorera kubatana kwake akasunungurwa kubva mujeri mushure memakore mashanu chete.
Iyo inozivikanwawo se "Red" Samuel Levine. Mug Shot
Samuel "Red" Levine (b. 1903) akanga ari nhengo yeMafia gang, Murder, Inc., boka rakakurumbira rakagadzirirwa kuuraya maMafia. Urongwa hwaLevine rwevanhu vakaurayiwa hwaisanganisira Joe "Bhosi" Masseria, Albert "Mad Hatter" Anastasia naBenjamin "Bugsy" Siegel.
Charles Luciano Mug Shot
Anozivikanwa saLucky Charles Luciano. Mug Shots
Charles "Lucky" Luciano (akaberekerwa Salvatore Lucania) (November 24, 1897 - January 26, 1962) akanga ari mhirizhonga weSicilian-America uyo akakura kuva mumwe wevarume vane simba mukurwisana kwakarongeka. Kusvikira nhasi uno simba rake pamusoro pemabasa e gangster muUnited States achiripo.
Akanga ari munhu wokutanga kupikisa "maMafia akare" kuburikidza nekuputsa nharo dzemadzinza nekugadzira mapoka emagandanga, ayo akaumba sangano rehurumende rinopomerwa mhosva uye akarongedzerwa kuparwa kwemhosva kwenguva refu asati afa.
Onawo: Nhoroondo yeCharles "Lucky" Luciano
Charlie Luciano (2)
Charlie "Lucky" Luciano. Mug Shot
Pane nhoroondo dzakasiyana-siyana pamusoro pekuti Luciano akawana sei "Lucky" sezita rezita rezita. Vamwe vanofunga kuti ndechokuti akaponesa kuedza kwehupenyu hwake. Vamwe vanotenda kuti zvaive nekuda kwekomborero sekubhejera. Vamwewo vanoti ainzi "Lucky" semucheche nekuda kwekuoma kweavo vatambi vake vangave vachitaura kuti Luciano yake yakarurama. Ndicho chikonzero "Lucky" aigara achitaura mushure meCharlie uye kwete mberi (Charlie "Lucky" Luciano).
Iyo inozivikanwawo se "Lupo the Wolf" uye "Ignazio Saietta" Ignazio Lupo. Mug Shot
Ignazio Lupo (March 19, 1877 - Jan. 13, 1947) akazova mutongi ane simba uye anotyisa mumakore ekutanga-1900 uye anozivikanwa nokuda kwekugadzirisa nekugadza hutungamiri hweMafia muNew York. Akave ari kukwira kune imwe yenhengo dzinonyanya kuzivikanwa dzeGlack Hand kudzvinyirira zvikwata, asi akarasikirwa nesimba rake rose mushure mokunge atongerwa mhosva yekutengesa mhosva.
Iyo inozivikanwawo se "Muurayi" Vincent Mangano. Mug Shot
Vincent Mangano (Kubvumbi 28, 1888 - Kubvumbi 19, 1951) akatanga kutanga neMafia achidzora mabheji eBrooklyn eAl Aquila nemhosva dzemhuri muma1920s. Mushure mokunge mutongi wemhosva ainzi Toto D'Aquila akaurawa uye Komisheni yakaumbwa, Lucky Luciano akasarudza Mangano sehodzi weimba yeAndigila pamwe nekumubvumira kushanda paKomisheni.
Mangano uye pasi pake, Albert "Mad Hatter" Anastasia, akarwisana nguva dzose pamusoro pekuti mabhizimisi emhuri anofanira kumhanya sei. Izvi zvakaita kuti Mangano aparadze, uye muna 1951 akaparara uye muvengi wake muduku, Anastasia, akatora mhuri.
Iyo inozivikanwawo se "Joe the Boss" Giuseppe Masseria. Mug Shot
Giuseppe "Joe the Boss" Masseria (munenge muna 1887-April 15, 1931) akanga ari mukuru wepamusoro-soro mukuru weNew York City muma1920 kusvikira apfuudzwa kusvika pakufa, zvichiita semirairo yaCharlie Luciano pane imwe resitorendi muConey Island mu 1931.
49 ve 55
Iyo inozivikanwawo se "The Last Don" Joseph C. Massino. Mug Shot
Anozivikanwa kuti ndiye wekutanga weNew York Mafia boss kubatirana nevane masimba.
Joseph C. Massino (January 10, 1943) akatumidzwa nevhidhiyo seThe Last Don, ndiye aiva mukuru wemhuri yeupomeri yaBonanno kutanga muna 1993 kusvikira atongerwa muna July 2004, zvekunyengedzera, kuuraya, kupamba uye dzimwe mhosva dzakadaro. Kuchengetedza chirango chekufa Massiono akabvumirana nevatsvakurudzi ndokunyora chifukidzo nemutevereri wake, Vincent Basciano, vachitaurirana hurongwa hwaBasciano hwokuuraya mutongi. Iye zvino ari kushandira zvirevo zviviri zveupenyu.
Iyo inozivikanwawo se "Clutch Hand" Giuseppe Morello. Mug Shot
Giuseppe Morello (Mbudzi 2, 1867 - Aug. 15, 1930) akauya kuU.S. pakutanga kwema1900 ndokugadzira Morello Mob, iyo yakazonyorwa mukunyengedza kusvikira muna 1909 apo Morello nevamwe vazhinji veboka rake vakasungwa ndokuendeswa kujeri.
Morello akasunungurwa kubva mujeri muna 1920 ndokudzokera kuNew York ndokuva Mafia ane simba "mukuru wevatariri vose." Akaita mari yemhuri pamwe nekupamba kwechikara nekunyengedza.
Hurongwa hwaMorello hwaive hunoonekwa sehunochengetedzwa nevakawanda vekuuya uye vachiuya Mafia vatambi uye muna 1930 akaurayiwa.
Iyo inozivikanwawo se "Bugsy" Bugsy Siegel. Mug Shot
Benjamin Siegel (February 28, 1906 - June 20, 1947) akanga ari chikwata chebasa raibata mubhejheti, kubhururuka, kuvhara motokari uye kuponda nehucheche shamwari, Meyer Lansky, mune izvo zvakazozivikanwa se "Bug and Meyer" sangano.
Muna 1937 Siegal akatamira kuHollywood uye ainakidzwa noupenyu hunofadza, achibatanidza mumakwikwi eHollywood anoshevedzera paairamba achiita basa rake risina kubhejera. Akaisa mari yakawanda pakuvaka Flamingo Hotel neCasino muLas Vegas, nemari yakakweretwa kubva kumhomho. Akapedzisira apfurwa uye akaurawa paakakundikana kudzorera purogiramu nokukurumidza uye akabhadhara mari yacho.
Iyo inozivikanwawo se "The Artichoke King" Ciro Terranova. Mug Shot
Ciro Terranova (1889-February 20, 1938) akanga ari mutungamiri mumwechete weEllollo mhuri yemhosva muNew York. Akawana mari yakawanda uye zita rake rezita rokuti "The Artichoke King" nekudzora michero muNew York City. Terranova yaibatanidzwawo mune zvinyorwa, asi akakwanisa kuchengetedza ukama hwakanaka nehupfumi hwemapurisa eNew York uye vezvematongerwo enyika. Pakazosvika 1935, Charlie Luciano akatora zvigadzirwa zveTerranova, zvichipa Terranova mari yepamusoro. Akafa kubva kune chirwere chaFebruary 20, 1938.
53 ve 55
Informant inozivikanwawo se "Joe Cargo" Joe Valachi "Joe Cargo". Congressional Photo
Joseph Michael Valachi aiva nhengo yemhuri yaLucky Luciano yemhosva kubva kuma1930 kusvika muna 1959 paakatongerwa mhosva yezvinodhaka uye akatongerwa makore 15.
Muna 1963, Valachi yakava chapupu chikuru kune Arkansas Senator John L. McClellan yemakurukota ehurumende pamusoro pehutongerwo hwakarongeka. Uchapupu hwake hwakatsigira kuvapo kweMafia uye akafumura mazita evanhu vanoverengeka vemhuri mishanu yeUnited crime uye vakapa zvakajeka zvemabasa avo ezvakaipa.
Muna 1968, pamwe nemunyori Peter Maas, akanyora memoirs yake, The Valachi Papers, iyo yakazoshandurwa ikava firimu inotarisa Charles Bronson seValachi.
Iyo inozivikanwawo se "Hymie" Earl Weiss. Mug Shot
Earl Weiss akashanda semubati weChicago's Irish-Jewish gang muna 1924, asi simba rake rakapera raigara. Weiss akafuridzirwa musi waOctober 11, 1926, mushure mekuramba kuramba nerugare pamwe neChicago chigamba chidiki, Al Capone.
55 ve 55
Iyo inozivikanwawo se "The Bug" Charlie Workman "The Bug". Mug Shot
Charlie (Charles) Workman akanga ari mhondi ye Murder Inc. inotungamirirwa naLouis Buchalter. Murder Inc., inonyanya kuitirwa vashandi veMafia. "Mukurumbira" wevashandi wakauya apo iye nemumwe akabatwa nehope, Mendy Weiss, vakapfura Dutch Schultz uye vatatu vevarume vake vakakurumbira musi waOctober 23, 1935. Schultz akatanga piritoniti kubva kumapuranga anopisa avo vaiti vauraya. Akafa makumi maviri nemaviri mushure mokupururudzwa. Mushandi wekupedzisira akawanikwa ane mhosva yekuponda kwaSchultz uye akapedza makore makumi maviri mujeri.
Nyaya yaEric Rudolph: The Olympic Park Bomber
Nhoroondo yeIdaho Teen Killer Sarah Johnson
Mhosva dzemuurayi Cop Antoinette Frank
Top 10 True Crime Crime About Psychopathic Killers
14 Chikoro Kudzidza Zvipo Zvako
Kutanga Italo-Etiopiya Hondo: Hondo yeAdwa
Dzidzai 6 Butterfly Families
Kudzidza mazano kune Vadzidzi vane Auditory Learning Style
Slash Biography uye Profile
Iwe Unayo Izvi 5 Zvakakosha Business Business?
Chii Chinonzi Eschatology?
Nhoroondo Pfupfupi yeTable Tennis / Ping-Pong
Makemikari mu Superfoods Anoita Kuti Vave Noutano Hwakanaka
Best Best R & B Nyimbo
10 Madzimambo aLitha: Zuva reChitatu Vanamwari uyekadzikadzikadzi
Shanduro Yakanaka Yepurojekiti Yebasa Dhiyabhorosi Dhigiridzo
Nzira Yokugadzirisa Sei "Mushonga" (Kushamba) muFrench
Dzidza Kusiyana pakati peParamende neStatisti
The Lyrics for "Christmas Eve" by Tatsuro Yamashita
Iyo Bvudzi! Zvinotarisana Nayo! The Art of the Hair and Makeup Designer
Nechokupinda Nzira yeGorofu Swing Mudzidzisi
Jamey Johnson Anotsvaga Mutsara Wake